Sista Juliet Lithemba vava Gamba Rekushanya muLesotho pakurwira kwavo COVID
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Lesotho Breaking News » Sista Juliet Lithemba vava Gamba Rekushanya muLesotho pakurwira kwavo COVID
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Lesotho Breaking News • nhau • vanhu • chengetedzo • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
UN News Center yanga ichigovana nezvekuti vanhu vakaita saThabana Ntlenyana anobva kuLesotho ari magamba echokwadi pakubatsira vanhu vake kupfuura nemudambudziko re COVID-19
Sista Juliet Lithemba vari kufananidzira magamba mazhinji pasi rese achienda nematanho akawanda ekuwedzera denda rinotyisa iri. TNhasi Sista Juliet Lithemba vakapihwa mukombe we Tourism Hero neWorld Tourism Network.
Pakazosvika pakati paApril, Lesotho yakanga yanyora dzinosvika zviuru gumi nezviviri zvehutachiona nevanhu vakafa mazana matatu nemakumi mashanu nevashanu sekutaura kweWHO Nyika yakaparura chirongwa chayo chekudzivirira cheCOVID-11,000 musi wa 315 Kurume 19 mushure mekugamuchira mishonga yekudzivirira kuburikidza neCOVAX Facility. Dzimwe 10 doses dzakapihwa kusvika parizvino, kunyanya kuvashandi vemberi.
Ichitsigirwa neWorld Health Organisation (WHO), UN Children's Fund (UNICEF), nevamwe vanobatsirana, zviremera zvakagadzira mameseji akanangwa kumapoka akati munharaunda munharaunda sevanhu vakura, vanotambura, uye vemunharaunda vane mamiriro akasiyana akadai seshuga uye BP.
Tourism ndiyo inowana mari yakawanda kuSouth Africa Nyika. Kurwisa COVID-19 kunodzosa chikamu ichi kudzoka chiri chipenyu.
Kuna Sista Juliet Lithemba, iro gore rapfuura rave "risingapfuure nyasha nenyasha kubva kumusoro", sekutsanangura kwavanoita. Mukadzi anemakore makumi manomwe nemapfumbamwe anogara kuMt Royal Convent yeSista yeCharity yeOttawa, iri mudunhu reLesibe mudunhu reLeribe, anga asingazive zvakawanda nezve COVID-77 kudzamara imba yake yemamongi uye hanzvadzi dzaainamata navo vatapukirwa nehutachiona hunouraya.
Kuchengetedza vanhu vakuru veLesotho, hurumende yanga ichiita chirongwa chinonzi Risk Communication uye Community Engagement Campaign. Izvo zvese nezve vanhu vari kubatsira vanhu.
Lesotho, hurefu-hwenzvimbo, hushe hwakakomberedzwa hushe hwakakomberedzwa neSouth Africa, hwakatenderedzwa nenzvimbo yenzizi nenzvimbo dzemakomo kusanganisira iyo 3,482m-yepamusoro pegomo reThabana Ntlenyana. Pabani reThaba Bosiu, padyo neguta guru reLesotho, Maseru, pane matongo kubva panguva yezana ramakore rechi19 kutonga kwaMambo Moshoeshoe I. Thaba Bosiu anotarisa pamusoro peGomo reQiloane, chiratidzo chinogara chiripo chevanhu vechiBasotho venyika iyi.
Iye akatsaurira hupenyu hwake kubasa rechitendero kubvira 1964, apo aingova 20-makore-ekuberekwa. Kwemakore makumi mana nemana ekuzvipira kwake, haasati amboona mhirizhonga yakadai ichiunzwa nechirwere senge panguva yedenda re COVID-47.
Sisi Lithemba vaive mumwe wevanhu vekutanga kuzivikanwa sechiitiko chakasimbiswa muna Chivabvu 2020 kuimba yavo yemasowe paakatanga kufunga kuti abatwa nechando.
"Hazvina kuuya sechishamiso kwandiri kuti ndaive nezviratidzo zvakaita sefuru nekuti muhupenyu hwangu hwese, ndange ndichinetsekana nehuswa", akadaro.
Izvo hazvina kuwana zvirinani sezvo mazuva akapfuura kudzamara ashanyira Chipatara cheMotebang, nzvimbo inongova nemabhuroko mashoma kubva kuimba yemasisita, kuti awane kurapwa. Mukoti aimubatsira pazuva iri akamuudza kuti aongorore COVID-19.
Mushure mekuongororwa vaine hutachiona, Sisi Lithemba vakaendeswa kuchipatara cheBerea kunozviparadzanisa nekutarisa. Aive pa oxygen mazuva ese gumi nemasere.
“Ndakatodzidziswa mashandisiro emuchina we oxygen. Ichokwadi kuti kwaizove kugara kwenguva refu muchipatara. Izvi, ndakadzidza mazuva apfuura ”, anodaro. Akatarisana nemubhedha wake paive nehanzvadzi yake yaibva kuimba yemasisita, iyo yainge ichinetseka kufema, ichidya kana kutonwa mvura.
"Haana kugona kumedza kana kuchengeta chero chinhu pasi", Sista Lithemba vanodaro. Gare gare, muvakidzani wake akafa zvinosuruvarisa.
Hutachiona hwanga hwapararira zvakanyanya zvekuti mazuva ese mamwe mazuva sista aizoendeswa kukiriniki yepedyo yepedyo, kunopihwa oxygen. Wekutanga pakati pehanzvadzi, aive mukuru 96.
'Varwi vakawandisa' varasika
Pakazara, imba yemasangano yakanyoresa zviitiko gumi nezvisere nezvakanaka zvitatu. Nehurombo, dzenyaya idzi dzakasimbiswa, vanomwe vafa.
“Idzi dzaive nguva dzekuedza kwatiri. Takarasikirwa nevarwi vakawanda muhondo iyi, uye hupenyu hahuzove hwakafanana ”, Sista Lithemba vanodaro. Iye nevamwe vanogara pamba apa vanoti havazive kuti vangatapukirwa sei panguva iyi kana kupi.
Mushure mekutanga kwehutachiona, imba yemamongi yakashandira kambani yekuchenesa uye inouraya utachiona, yakaraira munhu wese kuti vatevedze mitemo yeCOVID-19 uye vasiye vese vashandi vavo vagare pakambasi.
Dzimba dzavo dzevaeni dzakambovharwa kwenguva pfupi, kuti dzive nekufamba kushoma mukati nekubuda mumba.
“Panguva ino, munhu wese aifanira kugara mudzimba dzavo. Kune vanochenesa mudzimba dzese uye masuo ese uye mapoinzi ekubuda. Isu tinotevedzera kureba kwemuviri muhoro yedu yekudyira uye kana tichienda kuminamato yedu yemazuva ese. Takaona huripo hwehutachiona uhwu nenzira yakaoma, uye tiri kutora kuchengetedzeka kwedu zvakanyanya, ”Sister Lithemba vanodaro.
"Vanhu vakwegura ndivo vari panjodzi yeECVID-19 uye vari kukanganiswa zvakanyanya nedenda iri sezvo vari panjodzi huru yekutapukirwa nehutachiona nekuda kwekushomeka kwemaitiro ezvirwere zvemuviri pamwe nehutano huripo," anodaro Richard Banda, Mumiriri we WHO Lesotho.
Ndosaka timu yeUN muLesotho iri kutsigira zviitiko zvekudyidzana munharaunda, kunyanya ichitarisa vanhu vanotambura, uye kuronga misangano yakakosha kunoitiswa hurukuro dzekusimudzira hutsanana, ichicherechedza Do's and Don'ts of the COVID-19 denda.
"Tinofanira kusimbisa basa redu kuti tiwane Universal Health Coverage, uye kuti tizvichengetedze mukugadzirisa hutano pamwe nehupfumi, kurwisa kusarongeka uye kuvaka nyika yakanaka," VaBanda vakawedzera.
Pakazosvika pakati paApril, Lesotho yakanga yadzoreredza vangangoita zviuru gumi nezviviri zvehutachiona nekufa kwevanhu mazana matatu nemakumi matatu nevashanu sekutaura kweWHO Nyika yakaparura chirongwa chayo chekudzivirira cheCOVID-11,000 musi wa 315 Kurume 19 mushure mekuwana mishonga yekudzivirira kuburikidza neCOVAX Facility. Dzimwe 10 doses dzakapihwa kusvika parizvino, kunyanya kuvashandi vemberi.
“Chirwere chega chega chinoda mushonga, uye kunyangwe mushonga uyu usina kukwana, zvirinani zvinoderedza mikana yekufa uye kurwara zvakanyanya. Ndiyo tariro yese yatinoda ”, Sisi Lithemba vanodaro.
Iye zvino anotora matanho ese ekudzivirira aripo, kudzikisa huwandu hwehutachiona, kudzamara nyika yabata padenda iri.
Semumwe wevakapona paCOVID-19, Sista Lithemba vanokurudzira zviremera kuti zviwane zviwanikwa zvekugonesa zvikwata zvemunharaunda zvekushanyira makona ese ematunhu. Izvi, akadaro, zvinofanirwa kutarisa kusvika kune wese munhu, kusanganisira avo vari munzvimbo dzakaoma kusvika.
Iyo World Tourism Network ari kucherechedza magamba mazhinji asingazivikanwe mudambudziko iri uye ari kupa Sista Juliet Lithemba kuti vabatanidzwe mugamba rekushanya.
Meseji kune nyika: Tora pfuti yako paunogona kuiwana.